Nakaton’i Arabia Saodita indray ny Flickr sy ny Blogger · Global Voices teny Malagasy
Nakaton'i Arabia Saodita indray ny Flickr sy ny Blogger
Voadika ny 06 Novambra 2018 6:33 GMT
Roa andro lasa izay, nosakanan'ny (Sampana Servisy Aterineto) Internet Services Unit (ISU) ao amin'ny Tanànan'ny mpanjaka Abdul-Aziz ho an'ny Sinasa sy ny Teknolojia (KACST), sampan-draharaha mitantana ny aterineto ao Arabia Saodita ny Blogger, tsy mamela ireo mpisersera ao amin'ny firenena hiditra amin'ny blaoginy. Nosakanan-dry zareo ihany koa ny sary avy amin'ny tolotra fampidirina sary malaza Flickr. Mbola afaka miditra amin'ny tranonkala ihany ny mpiserasera, saingy tsy hita intsony ny sary.
Nandritra ny roa taona, nosakanan'ny ISU imbetsaka ny anaran-tsehatra BlogSpot.com, izay misy ny bilaogy maimaim-poana ampiasan'ny Blogger, saingy nalefany indray avy eo. Toy izany koa no nitranga tamin'ny Flickr.
Azafady ampio izahay hanokatra ireo tranonkala ireo ho an'ireo mpiserasera ao Arabia Saodita amin'ny famenoana ity taratasy ity, na amin'ny fandefasana mailaka amin'ity adiresy ity: unblock@isu.net.sa.
VAOVAO FARANY: Nosokafana tamin'ny Alarobia ny Blogger.com, saingy mbola voasakana ny sary ao amin'ny Flickr.